सेनाका जर्नेको खातामा भेटियो ३२ लाख - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
सेनाका जर्नेको खातामा भेटियो ३२ लाख
कृषि विकास बैकमा ५ करोड घोटला
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक न्यूरोड शाखा कार्यालयको चार करोड ९१ लाख रुपैयाँ हिनामिनामा बैक प्रवन्धकसहित नेपाली सेनाका जर्नेलसम्म मुछिएका छन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले गरिरहेको अनुसन्धान अनुसार कर्मचारीको मिलेमतोमा घोटला भएको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रवन्धक सहित पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पर्नेमा रामेछाप नगरपालिका ८ स्थायी घर भएर काठमाडौं बस्ने प्रेमहरि ढुंगेल, गोरखा पालुङटा स्थायी घर भएर टोखा बस्ने गोपाल गिरी र गोरखा बक्राङ घर भएर हाल चन्द्रागिरी बस्ने महेश्वर मरहठ्ठा छन ।
यी मध्ये ढुंगेल न्यूरोड शाखाका तत्कालीन कामु मुख्य शाखा प्रबन्धक, गिरी इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स (ईसीसी) प्रमुख र मरहठ्ठा कर्जा प्रमुख रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसअघि सीआईबीले बैंकको सहायक टेलर दिपिका रेग्मी, उनका सहयोगी रमेशकुमार थापा र दुर्गा ज्वलर्स बालाजुका सञ्चालक प्रकाश घतानीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । खासगरी बैकमा कार्यरत दीपीका रेग्मी यसको मुख्य डिजाइनर भएको प्रहरीले दावी गर्दे आएकोमा अहिले प्रवन्धक पनि पक्राउ परेपछि थप अनुसन्धान जारी रहेको सिआइवीले जनाएको छ । सीआईबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्कर कार्कीका अनुसार गिरी, घतानी र थापाकै बयानका आधारमा थप प्रवन्धकलाई पक्राउ गरिएको हो ।
‘अन्तर शाखा कारोबारको क्लियरेन्सको हिसाब ईसीसी गर्ने कार्यमा संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गरिएको हो, रकम हिनामिनामा उनीहरुको पनि संलग्नता छ, डीआइजी कार्कीले भने, ‘कस्ले कति रकम बुझे थप अनुसन्धान गर्देछौ ।’सीआइबीले पक्राउ परेका उनीहरुमाथि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत अनुसन्धानको लागि उच्च अदालत पाटनबाट सात दिनको थुना अनुमति पाएको छ । कार्कीका अनुसार यो समूहले इसीसीमार्फत् हितग्राहीको खातामा रकम जम्मा गरिदिएपछि सोही चेकलाई पुनः कोर बैंकिङ सिष्टम (सीबिएस) मार्फत् गैरकानुनी रुपमा रेग्मी र उनका आफन्तको खातामा जम्मा गरिदिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । रेग्मीको खातामा चेक जम्मा गर्दा ढुंगेल गिरी र मरहठ्ठाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेका उनले बताए ।
सीआईबीको अनुसन्धानबाट रेग्मीले ठगी गरेको केही रकम आफन्त पर्ने सेनाका रथी डा. रमेश विष्टको खातामा समेत भेटिएको छ । स्रोतका अनुसार सीआईबीले यसबारे सैनिक मुख्यालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । ‘विष्टको खातामा रेग्मीले नै पैसा हालिदिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ, विष्टमाथि कारबाही गर्ने विषयमा सैनिक मुख्यालयसँग बुझ्ने काम भइरहेको छ,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो ।कृषि विकास बैंकको न्युरोड शाखामा भएको अनियमिततामा बैंकका सिनियर कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता खुलेको छ । सैनिक मूख्यालय स्रोतले पनि सेनाका जर्नेल डा. विष्टलाई यससम्बन्धमा छानवीन गरिरहेको जनाएको छ ।
४ करोड ९१ लाख घोटाला
बैंकको न्युरोड शाखाबाट ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको थियो। जसमा बैंकका दुई कर्मचारीसहित तीन जनालाई सिआईबीले केही साता अद्धि नै पक्राउ गरेपछि यसको थप रहस्य बाहिर आएको हो । बैंककी सहायक टेलर दीपिका रेग्मीको योजनामा घोटाला भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ। रेग्मीसहित प्रहरीले बैंकका पियन अर्दली रमेश थापा र सुन पसले प्रकाश घतानीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी बैंकिङ कसुर मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइसको भएपनि अरुपनि मुछिन सक्ने जनाएको थियो । प्रहरीले जर्नेल डा. विष्टलाई पनि बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो । उनी सैनिक अस्पताल छाउनीमा कार्यरत छन् ।
अन्तरशाखा कारोबार हिसाब ‘क्लियरिङ’ को रकम पेन्डिङमा राखेको देखाई सो रकम दीपिकाले आफूले राख्ने गरेकी थिइन् । करिब एक वर्षअघिदेखि उनले पटकपटक गरेर बैंकमा घोटाला गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । बैंकको आन्तरिक छानबिनमै सो कुरा खुलेपछि सिआइबीमा उजुरी गरिएको थियो । दीपिकाको बयानका आधारमा अन्य कर्मचारी पक्राउ परेका हुन् । सो घोटालमा नेपाली सेनाका जर्नेल डा. रमेश बिष्टमाथि पनि सेनाले छानबिन गरिरहेको छ । घोटाला भएको मध्ये ३२ लाख रकम उनको खातमा भेटिएको थियो । दीपीका र विष्ट आफन्त भएको प्रहरीले जनाएको छ । अहिले सो मुद्धा राष्ट्रबैकको अनुरोधमा सिआइवीको आर्थीक अपराध हेर्ने पिलर नं २ ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कृषि विकास बैकमा यसअघि स्वयम्भू शाखाबाट पनि करोडौ रुपैया घोटला भएको थियो ।